Facebook ၏ လူမှုကွန်ယက်စံနှုန်းများနှင့် အကြံပြုချက်များ
Facebook ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပြင်ဆင်မှုများ
လုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုများ (Security settings)
အကောင့်ဝင်မှု သတိပေးချက်များ (Login alerts)
အကောင့်ဝင်ရောက်မှု အတည်ပြုခြင်းများ (Account approvals)
အကောင့်ဝင်ရောက်မှု အတည်ပြုကုတ်များ (Login Approvals Codes)
စိတ်ချရသော အဆက်အသွယ်များ (Trusted contacts)
အသိအမှတ်ပြုပြီးသော ပစ္စည်းများ (Recognized devices)
အကောင့်ကို လက်ရှိဖွင့်ထားသည်များ (Active sessions)
သေတမ်းစာ အဆက်အသွယ် (Legacy contacts)
အကောင့် ဖျက်သိမ်းရန် (Account deactivate)
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပြင်ဆင်မှုများ (Privacy settings)
၁။ကိုယ်တင်တာတွေကို ဘယ်သူမြင်နိုင်မလဲ? (Who can see my stuff?)
(က) နောက်ထပ်တင်မယ့် စာစုတွေကို ဘယ်သူတွေ မြင်နိုင်မလဲ? (Who can see my future posts?)
(ခ)စာစုများကို ကန့်သတ်ရန် (Limit old posts)
၂။ ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေ ဆက်သွယ်နိုင်လဲ? (Who can contact me?)
(က) ဘယ်သူတွေက သူငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့် တောင်းဆိုနိုင်မလဲ? (Who can send you friend requests?)
၃။ ကျွန်ုပ်ကို ဘယ်သူရှာတွေ့နိုင်မလဲ? (Who can look me up?)
(က)ကိုယ်ပေးထားတဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့ ဘယ်သူတွေ ကိုယ့်ကို ရှာနိုင်မလဲ? (Who can look you up using the email address you provided?)
(ခ) ကိုယ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဘယ်သူတွေ ကိုယ့်ကို ရှာနိုင်မလဲ? (Who can look you up with the phone number you provided?)
(ဂ) Facebook ပြင်ပရှိ ရှာဖွေရေး ဆော့ဖ်ဝဲများကို သင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်လိုပါသလား? (Do you want search engines outside of Facebook to link to your profile?)
Report ကို နှိပ်လိုက်သည့် အခါတွင် တွေ့ရသည့် အကြောင်းအရာကိစ္စရပ်များ
ကနဦးစွာ ဖေ့စ်ဘွတ်ကို အချက်သုံးချက်ဖြင့် စမတ်ကျကျ သုံးနိုင်ပါသည်။
၁။ အပ်ပလီကေးရှင်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို တရားဝင် Google Play store သို့မဟုတ် App Store တွေမှ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
၂။ လုံခြုံရေးကို အလေးထားကြမည်။
Facebook မှ အပ်ပလီကေးရှင်းများ၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို အောက်ပါလင့်တွင် ရနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလင့်တွင် Facebook၊ Facebook Lite၊ Facebook Page Manager အစရှိသဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်မှ ပြုလုပ်ထားသော အပ်ပလီကေးရှင်းများကို ရနိုင်ပါသည်။
အပ်ပလီကေးရှင်းများကို နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ရန် အဘယ်ကြောင့် Update(မြှင့်တင်) ရန်၊ Google play သို့မဟုတ် App Store မှသာ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသလဲ?
၁။ မိမိ၏အပ်ပလီကေးရှင်းသည် နောက်ဆုံးဗားရှင်းမဖြစ်ပါက နောက်ဆုံးဗားရှင်းများတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်မည့် featureများကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၂။ အပ်ပလီကေးရှင်းကို ရေးသောသူများ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ တရားဝင် အပ်ပလီကေးရှင်းများကို Google play သို့မဟုတ် App Store တို့တွင်သာ တင်ပါသည်။ အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် တင်ထားသော အပ်ပလီကေးရှင်းများသည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ပြုပြင်ထားခြင်းမလုပ်ထားပါဟု တာဝန်မခံနိုင်ပါ။ ထို့အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Google play သို့မဟုတ် App Store မှ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
General Settings - Addanew email address or phone number
Setting > Personal information > Email Address ကိုနှိပ်ပါ။
သင့် gmail ကလုံခြုံမူမရရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရရင်
သင့် facebook ကို လုံခြုံရေးတိုးမြင့်လိုလျှင်
Gmail အသစ် Phone Number အသစ်ပြောင်းလဲလို့ရမှန်းမသိရင်
Gmail address & Phone number အသစ်ထဲ့လိုပါက
လုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုများ -- Security Settings
ဖေ့စ်ဘွတ်၏ ညာဘက်ရှိ မျဥ်းကြောင်းသုံးကြောင်းပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ နှိပ်လိုက်သည့်အခါ အောက်ပါအတိုင်း မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ Facebook version ပြောင်းလဲမူအပေါ် setting ပြောင်းလဲမူရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ ရွေးချယ်စရာများထဲမှSetting > Account Settings (အကောင့်အပြင်အဆင်များ) ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
(၁) အကောင့်ဝင်မှု သတိပေးချက်များ -- Login alerts
အကောင့်ဝင်မှု သတိပေးချက်များဆိုတာက ဘာလဲ?
အကောင့်ဝင်မှု သတိပေးချက်ဆိုသည်မှာ လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကောင့်ဝင်မှု သတိပေးချက်ကို ဖွင့်ထားသည်ဆိုပါက မိမိသုံးနေကျမဟုတ်သည့် နေရာတစ်ခုမှ ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ဝင်သည့်အခါတိုင်း သတင်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကောင့်ဝင်မှု သတိပေးချက်ကို ဖွင့်ရန်
၁။ Settings >Security and login (လုံခြုံမှုပြင်ဆင်ချက်များ) ကို သွားပါ။
၂။ Get alerts about unrecognized logins ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၃။ မိမိလိုချင်သည့် သတင်းအမျိုးအစားကို ရွေး၍ သတင်းရယူနိုင်ပါပြီ။
အကောင့်ဝင်မှု သတိပေးချက်များကို ဖွင့်ပြီးသည့်အခါ
မိမိ၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် browserကို အသိအမှတ်ပြုပြီးသောပစ္စည်းများထဲတွင် ထည့်နိုင်ပါသည်။ ဤသို့ ထည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအမြဲသုံးနေသော နေရာများမှ ဖေ့စ်ဘွတ်အားဝင်သည့်အခါ သတင်းပို့စရာမလိုရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ မိမိအခုသုံးနေသော ဖုန်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျုတာသည် အများသုံးပစ္စည်းများ ဖြစ်နေပါက အသိအမှတ်ပြုပြီးသော ပစ္စည်းများထဲတွင် မထည့်ပါနှင့်။
မိမိမသိသော browser သို့မဟုတ် နေရာများမှ မိမိအကောင့်ကို ဝင်သည်ဟု သတင်းရခဲ့ပါက မိမိ၏အကောင့်ကို ပိုမို၍ လုံခြုံစိတ်ချရရန် password (စကားဝှက်)ကို ပြန်ပြောင်းပါ။
(၂) အကောင့်ဝင်ရောက်မှု အတည်ပြုခြင်းများ -- Use Two-factor authenication
အကောင့်ဝင်ရောက်မှု အတည်ပြုခြင်းများဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ?
အကောင့်ဝင်ရောက်မှု အတည်ပြုခြင်းများဆိုသည်မှာ အကောင့်ဝင်ရောက်မှု သတိပေးချက်များကဲ့သို့ လုံခြံရေးပြင်ဆင်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါတွင် နောက်ထပ် အဆင့်တစ်ခု ပိုလာပါသည်။ အကောင့်ဝင်ရောက်မှု အတည်ပြုခြင်းကို ဖွင့်လိုက်ပါက မိမိသုံးနေကြမဟုတ်သည့် ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း သို့မဟုတ် browser မှ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်ကို ဝင်လိုက်သည်ဆိုပါက အကောင့်ကို ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် အထူးလုံခြုံရေးကုတ်တစ်ခုကို ဖေ့စ်ဘွတ်မှ တောင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိသုံးနေကြဖြစ်သည့် ပစ္စည်းများမှ ဝင်ရောက်သည့်အခါတိုင်းတွင် ကုတ်ကို မတောင်းခံစေလိုပါက မိမိသုံးနေကြပစ္စည်းများကို အသိအမှတ်ပြုပြီးသောပစ္စည်းများထဲတွင် ထည့်ထားနိုင်ပါသည်။
၁။ Setting > Security and login
၂။ Use Two-factor authentication > Get Started
မှတ်သားထားရမည်မှာ အကောင့်ဝင်မှု အတည်ပြုခြင်းကို ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက် မိမိ၏အကောင့်တွင် ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ထားရန် လိုအပ်သည်။
အကောင့်ဝင်ရောက်မှု အတည်ပြုခြင်းကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်အခါ Facebook မှ “Use Two-factor authentication Codes” မိမိသွင်းထားသော mobile phone number သို့ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
အကောင့်ဝင်ရောက်မှု အတည်ပြုကုတ်များ (Recovery Codes) ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ?
Recovery code ဆိုသည်မှာ Login Approvals (အကောင့်ဝင်ရောက်မှု အတည်ပြုခြင်း) ဟု ခေါ်သည့် လုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုများထဲက တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ခရီးသွားတဲ့အချိန်တွေ မှာ သင့်ဖုန်းမပါခဲ့သည်ရှိသော် facebook ကို login ဝင်နိုင်ရန်ထို code များလိုအပ်သည်။ အခြားဖုန်းကွန်ပြူတာ များတွင် login ဝင်နိုင်ရန်လည်းထိုကုဒ်ကိုလိုအပ်သည်။
Setting > Security and login > Use Two-factor authentication Codes > Recovery Codes
ကုတ်တစ်ခုကို တစ်ခါစီသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကုတ်များကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် ပျောက်သွားပါက အသစ်ထပ်ရရန် get new codes နှိပ်နိုင်ပါသည်။
(၄) စိတ်ချရသော အဆက်အသွယ်များ -- Trusted contacts
စိတ်ချရသော အဆက်အသွယ်များ ဆိုတာ ဘာတွေလဲ? စိတ်ချရတဲ့ အဆက်အသွယ်တွေကို ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာ ဘယ်လိုထည့်နိုင်မလဲ?
စိတ်ချရသော အဆက်အသွယ်များ ဆိုသည်မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်နှင့် ပတ်သတ်၍ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာတက်ပါက (ဥပမာ - အကောင့်စကားဝှက်မေ့သွားခြင်း) အဆိုပါစိတ်ချရသော အဆက်အသွယ်များထဲတွင် မိမိထည့်ထားသည့်လူအား ဆက်သွယ်၍ အကူအညီရနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ချရသော အဆက်အသွယ်ကို မိမိစိတ်ချရသူတစ်ယောက် သို့မဟုတ် စိတ်ချရသူများအားပေးထားပြီးပါက နောက်ပိုင်း မိမိအကောင့်ကို ဝင်၍မရပါက အဆိုပါသူများမှ အထူးအနေဖြင့် မိမိအကောင့်သို့ ဝင်ခွင့်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးဆိုသည်မှာ သင့်အကောင့်အား တစ်ခါသုံး လုံခြုံရေးကုတ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်မှ URLက တဆင့် ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်မှ သင့်စိတ်ချရသူကို ဖုန်းဆက်၍ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်၍ ကုတ်ကိုမေး၍ အကောင့်ကို ပြန်ဝင်နိုင်ပါသည်။
မိမိအကောင့်တွင် စိတ်ချရသူများကို ထည့်ရန်
၁။ Trusted Contacts ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၂။ Choose Trusted Contacts ကို နှိပ်ပါ။
၃။ သူငယ်ချင်း အနည်းဆုံး ၃ယောက်မှ အများဆုံး ၅ယောက်ထိ ရွေးချယ်၍ မိမိ၏ ရွေးချယ်မှုများကို အတည်ပြုပါ။
စိတ်ချရသော အဆက်အသွယ်များတွင် ထပ်ထည့်လိုပါက ထပ်ထည့်ရန် (Add more) ကို နှိပ်ပြီး ထပ်မံရွေးချယ်၍ ထပ်ထည့်နိုင်ပါသည်။ အားလုံးကို ဖယ်ရှားလိုပါက အားလုံးဖယ်ရှားရန် (Remove all) နှိပ်ပြီး ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။ တစ်ယောက်ချင်းကို ဖယ်ရှားလိုပါက ထပ်ထည့်ရန်ကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ မိမိရွေးပြီးသော လူများ ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ မိမိဖယ်ရှားလိုသော လူကို ကြက်ခြေခတ်နှိပ်၍ ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
Setting > Security and login> Choose friends to contact if you get locked out သို့သွား၍ ထည့်နိုင်ပါသည်။
စိတ်ချရသော အဆက်အသွယ်များမှာ ထည့်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေစီကနေ ကိုယ့်အကောင့်ကို ဘယ်လိုပြန်ယူရမှာလဲ?
အကယ်၍ သင့်အကောင့် ပိတ်ကျသွားသည်ဆိုပါက အထက်တွင် ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း စိတ်ချရသော အဆက်အသွယ်တွင် မိမိမိတ်ဆွေများကို ထည့်၍ အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။ စိတ်ချရသော အဆက်အသွယ်များကို ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါက
၁။ Forgot your password? ကို နှိပ်၍ မိမိအကောင့်ကို ရှာပါ။
၂။ စိတ်ချရသော အဆက်အသွယ်ကို သုံး၍ မိမိအကောင့်ကို ပြန်ရနိုင်ရန် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်လုပ်ပါ။
၃။ လုပ်ပြီးပါက URL တစ်ခုကို ရလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုURL ကို မိမိစိတ်ချရသည့်စာရင်းထဲတွင် ထည့်ထားသည့် သူငယ်ချင်းသာ ဖွင့်နိုင်၍ ကုတ်ကို ရနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ URLရလာပါက မိမိသူငယ်ချင်းကို ထို URLကို ပေးပါ။ ၎င်း ဖွင့်လိုက်သည့်အခါ ကုတ်တစ်ခုကို ရမည်ဖြစ်သည်။
၄။ ထိုအခါ သင်မှ ထိုကုတ်ကို ၎င်းထံမှ တောင်းပြီးနောက် အကောင့်ကို ဝင်ရောက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါပြီ။
ထိုသို့ ဖြစ်လာပါက မိမိစိတ်ချရသည့်စာရင်းတွင် ထည့်ထားသည့် သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းခေါ်၍ဖြစ်စေ၊ လူချင်းတွေ့၍ ဖြစ်စေ ပြောပါ။ သင့်အကောင့်သည် ဟက်ကာတစ်ယောက်၏ အဟက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါက သင့်အကောင့်၏ အီးမေးကို ပြောင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
(၆) အသိအမှတ်ပြုပြီးသော ပစ္စည်းများ -- Recognized devices
အသိအမှတ်ပြုပြီးသော ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် browser ဆိုတာ ဘာလဲ?
Recognized Devices တွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ကို အသုံးပြုရာတွင် သုံးထားသည့် browser များနှင့် ပစ္စည်းများ၏ စာရင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ browser များနှင့် ပစ္စည်းများမှ သုံးပါက အကောင့်ကို ဝင်သည့်အခါတွင် မည်သည့်ကုတ်ကိုမှ တောင်းခံမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် မိမိ၏ အသိအမှတ်ပြုပြီးသော ပစ္စည်းများစာရင်းတွင် မိမိလက်ရှိသုံးစွဲနေသာ browser များနှင့် ပစ္စည်းများ မဟုတ်သော အရာများကို ဖျက်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိလက်ရှိသုံးစွဲနေသော browser များနှင့် ပစ္စည်းများသည် ထိပ်ဆုံးတွင် ရှိမည် ဖြစ်၍ လွန်ခဲ့သည့် လများ၊ နှစ်များတွင် သုံးခဲ့သော browser များနှင့် ပစ္စည်းများသည် အောက်တွင် ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိလက်ရှိသုံးနေသာ အရာသည် တစ်ခုတည်း ဖြစ်ပါက ထိပ်ဆုံးမှ တစ်ခုကိုသာ ချန်၍ အောက်တွင်ရှိသော စာရင်းအားလုံးကို ဖျက်ပစ်ရန် လိုပါသည်။
၁။ Setting > Security and Login >Authorized Login ထဲကို ဝင်ပါ။
၂။ ဖျက်မည့် အရာများကို ဘေးတွင် ကြက်ခြေခတ်ပြထားသည့်ပုံအား နှိပ်၍ ဖျက်နိုင်ပါသည်။
(၇)အကောင့်ကို လက်ရှိဖွင့်ထားသည်များ -- Active sessions
ယခုတွင်လည်း အသိအမှတ်ပြုပြီးသော ပစ္စည်းများကဲ့သို့ပင် မိမိယခုလက်ရှိ အသုံးပြုနေခြင်းမရှိသည်များကို ဖျက်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁။ Active sessions ထဲကို ဝင်ပါ။
(၈) သေတမ်းစာ အဆက်အသွယ် -- Legacy contacts
Setting > Personal Information >Manage Account > Legacy Contact
သေတမ်းစာ အဆက်အသွယ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
သေတမ်းစာ အဆက်အသွယ်ဆိုသည်မှာ မိမိသေဆုံးပြီးနောက်တွင် မိမိ၏ အကောင့်အား ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးရန် တစ်စုံတစ်ရောက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်ခွင့်ပြုထားသည့် လူများမှ အောက်ပါ အရာများကို လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ပရိုဖိုင်(profile) ၏ ထိပ်ဆုံးတွင် အမြဲတမ်းပေါ်နေမည့် pinned post ကို ရေးနိုင်ပါမည်။ (ဥပမာ - အမှတ်တရအနေဖြင့် သင့်ကိုယ်စား နောက်ဆုံး စာကို ရေးပေးခြင်း)
သူငယ်ချင်းအဖြစ်လက်ခံပေးရန် တောင်းဆိုမှုများကို လက်ခံပေးခြင်း (ဥပမာ -ငယ်သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် အကောင့်ထဲတွင် မရှိသေးသော ဆွေမျိုးများ)
ပရိုဖိုင်ပုံနှင့် ကာဗာပုံကို ပြောင်းပေးနိုင်ခြင်း
မိမိ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တွင် မျှဝေထားသော အရာအားလုံးကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်း ပေးနိုင်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင် အဆိုပါ လူများမှ အောက်ပါအရာများကို မလုပ်နိုင်စေရန် လုပ်နိုင်ကောင်း လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင့်သေတမ်းစာ အဆက်အသွယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရထားသော လူများမှ အောက်ပါ အရာများကို မလုပ်နိုင်စေရန်
သင်မျှဝေထားသော စာများ၊ ပုံများကို ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်း
အခြားသူများနှင့် ပြောထားသော စကားများကို ဖတ်ခြင်း
သူငယ်ချင်းစာရင်းထဲတွင် ရှိပြီးသားသူများကို ဖယ်ထုတ်ခြင်း
မှတ်သားရန်မှာ သေတမ်းစာအဆက်အသွယ်ထားနိုင်ရန် အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးရန် လိုအပ်ပါသည်။
သေတမ်းစာ အဆက်အသွယ်ကို ထည့်ရန်
Setting > Personal information > Manage Account သို့ဝင်ပါ။
၁။ Legacy contact ကို သွားပါ။
၂။ ပစားပေး အဆက်အသွယ်များကို ရွေးပါ (Choose legacy contact) ကို နှိပ်ပါ။ပြီးနောက် မိမိထည့်လိုသော လူ၏နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ရွေးပါ။
၃။ မိမိရွေးလိုက်သော လူကို သူ့အား ရွေးရခြင်းအကြောင်ကို အသိပေးရန်အတွက် စာတို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ပေးပို့လိုပါက Send ကို ရွေးပါ။ မပေးပို့ချင်သေးပါက Not now ကို ရွေးပါ။
ထို့နောက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါလူကို ဖယ်ရှားလိုပါက ဖယ်ရှားရန် (Remove)ကို နှိပ်၍ ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
Data Archive Permission ဆိုသည်မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တွင် မိမိမျှဝေခဲ့သော အရာများကို ထိုသူအား ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့် ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာများတွင် စာများ၊ ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် မိမိ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတွင် တင်ခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး စာတို(message) များ မပါဝင်ပါ။ ခွင့်ပြုမည် ဆိုပါက Yes, Allow ကို ရွေး၍ ခွင့်မပြုပါက No, Don’t Allow ကို ရွေးနိုင်ပါသည်။
Account Deletion ဆိုသည်မှာ မိမိ သေဆုံးပြီးနောက် မိမိ၏အကောင့်ကို ရာသက်ပန်ဖျက်ခွင့်ကို ရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မဖျက်စေလိုပါက No, Don’t Delete ကို ရွေး၍ ဖျက်စေလိုပါက Delete After Death ကို ရွေးပါ။
(၉) အကောင့် ဖျက်သိမ်းရန် -- Account deactivate
အကောင့်ကို ဘယ်လို ဖျက်သိမ်းရမလဲ?
အကောင့်ကို မိမိကြိုက်သည့်အချိန်တွင် ယာယီဖျက်သိမ်းနိုင်ပါပြီး ကြိုက်သည့်အချိန်တွင် ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁။ လုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှု၏ အောက်ဆုံးကို သွားပါ။
၂။ Deactivate ကို နှိပ်ပြီးလျှင်
၃။ ယာယီဖျက်သိမ်းလိုသည့် အကြောင်းတစ်ခုခုကို ရွေးပါ သို့မဟုတ် other တွင် ဖျက်သိမ်းရသည့် အကြောင်းကို ရေးပါ။ပြီးလျှင် ဖျက်သိမ်းရန် (Deactivate) ကို နှိပ်ပြီး ယာယီဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသည်။
Facebook မှ ပို့ပေးမည့် အီးမေးလ်များကို လက်မခံတော့ပါကို မရွေးထားခဲ့ပါက အကောင့်ယာယီဖျက်သိမ်းပြီးသည့်နောက်တွင် သင့်သူငယ်ချင်းများက သင့်အား အစီအစဥ်များသို့ ဖိတ်ကြားခြင်း၊ ဓာတ်ပုံများတွင် ရည်ညွှန်းခြင်း၊ အဖွဲ့များတွင် ပါဝင်ခိုင်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နေနိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးထားခဲ့လျှင် သင် ဤအီးမေးလ်ဖိတ်ကြားချက်များနှင့် သင့်သူငယ်ချင်းများထံမှ အသိပေးချက်များကို လက်ခံရရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။
သင့်အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းပြီးပါက အခြားသူများမှ သင့်အကောင့်ကို မြင်နိုင်မည် မဟုတ်သလို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်လည်း မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ပြောထားသော စကားများကို မြင်နိုင်ပါသေးသည်။ အကောင့်ကို ယာယီဖျက်ပြီးနောက် ပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါက မိမိအကောင့်ကို ပြန်ဝင်လိုက်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ သတိပြုရန်မှာ မိမိအကောင့်ကို ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဝင်သည့်အခါ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် စကားဝှက်ကို မှတ်မိရန်လိုအပ်ပါသည်။
အကောင့်အား ရာသက်ပန်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါက မိမိအကောင့်တွင် မျှဝေထားသည့် မည်သည့်အရာကို ပြန်လည်ရနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ မိမိအကောင့်ကို ရာသက်ပန် ဖျက်သိမ်းလိုပါက ဤလင့်ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Change Password - စကားဝှက်ပြောင်းခြင်း
Setting > Security and Login > Change password သို့ဝင်၍ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
မိမိအကောင့် လုံခြုံမူမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားလာရတဲ့အခါ
မိမိ facebook အကောင့်ကို အတင်းအကြပ်တောင်းယူချင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရသောအခါ
အကောင့် password ကိုတစ်ခြားတစ်ယောက်သိနေတယ်လို့ ခံစားရသောအခါ
မိမိကိုယ်တိုင် password ပြောင်းလိုစိတ်ရှိသောအခါ
အကောင့် password ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပြင်ဆင်မှုများ -- Privacy Settings
Setting > Privacy Settings သို့ဝင်ပါ။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပြင်ဆင်မှုများတွင် ယေဘူယျအားဖြင့် အချက် ၃ ချက်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေ ဆက်သွယ်နိုင်လဲ?
ကျွန်ုပ်ကို ဘယ်သူရှာတွေ့နိုင်မလဲ? တို့ ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ကိုယ်တင်တာတွေကို ဘယ်သူမြင်နိုင်မလဲ? -- Who can see my stuff?
(က) နောက်ထပ်တင်မယ့် စာစုတွေကို ဘယ်သူတွေ မြင်နိုင်မလဲ?
ပုံသေအားဖြင့် မိမိတင်သည့် စာများ၊ ပုံများကို အများဆိုင်မှ မြင်နိုင်ပါသည်။ မိမိတင်သည့် စာများ၊ ပုံများကို အများဆိုင်၊သူငယ်ချင်းများ၊ သို့မဟုတ် မိမိတစ်ဦးတည်းသာ အစရှိသဖြင့် မြင်နိုင်မည့်သူကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
၁။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပြင်ဆင်မှု (Privacy settings) ကို သွားပါ။
၂။ မည်သူမဆို (Public) ၊ သူငယ်ချင်းများ (Friend )၊ သို့မဟုတ် မိမိတစ်ဦးတည်းသာ (Only me) စသည့် ရွေးချယ်မှုများတွင် မိမိရွေးချယ်လိုသူကို ရွေးပါ။
တစ်ခု အကြံပြုလိုသည်မှာ မည်သူမဆိုကို ရွေးလိုက်ပါက မိမိတင်သမျှအရာအားလုံးကို လူတိုင်းက မြင်နိုင်သည် ဖြစ်ပါ၍ မိမိ၏ လုံခြုံရေးကို အလေးထားပါက မည်သူမဆို (Public) ကို မရွေးချယ်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
(ခ)စာစုများကို ကန့်သတ်ရန် -- Limit old posts
ကိုယ့်အရင်တုန်းက တင်ထားတဲ့ စာတွေ၊ ပုံတွေ ကြည့်နိုင်တဲ့လူကို ဘယ်လိုကန့်သတ်လို့ရနိုင်မလဲ?
စာ သို့မဟုတ် ပုံတစ်ပုံကို တင်ပြီးသောအခါတွင်မှ မည်သူမြင်နိုင်မည်ကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲလိုပါက audience selector ကိုရွေးပြီး စာတစ်ခုတိုင်း သို့မဟုတ် ပုံတစ်ပုံတိုင်းတွင် ပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် မိမိတင်ထားသော စာအဟောင်းများ၊ ပုံအဟောင်းများအားလုံးကို မြင်နိုင်တဲ့လူတွေကို သူငယ်ချင်းများအတွက်ပဲ ပြောင်းလဲလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
၁။ Account Settings > Privacy ကို သွားပါ။
၂။ Who can see my stuff? အပိုင်း၏ အောက်တွင် Limit the audience for posts I've shared with friends of friends or Public? ကို သွားပါ။
၃။ အတည်ပြုပါ (Limit Old Posts) ကို နှိပ်ပါ။
ဤကိရိယာကို အသုံးပြုသည့်အခါတွင် အရေးကြီးသည့် မှတ်ထားရမည့် အချက်များသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ ကန့်သတ်မှုများကို အပြောင်းအလဲလုပ်ချင်ပါက စာတစ်ခုချင်း သို့မဟုတ် ပုံတစ်ပုံတိုင်းတွင်သာ လိုက်လံပြောင်းလဲနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
စာအဟောင်းများ၊ ပုံအဟောင်းများတွင် တစ်ချို့သူများကို မမြင်နိုင်ရန်(Friends except Acquaintances) ကို ရွေးထားပါက သို့မဟုတ် အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေများ (Close Friends) ကို ရွေးထားပါက ဤကိရိယာကို သုံး၍ ကန့်သတ်၍လည်း မရနိုင်ပါ။
အကယ်၍ မိမိ၏ စာအဟောင်း၊ ပုံအဟောင်းများတွင် အခြားသူများကို တဂ် (tag) လုပ်ခဲ့ပါက ထိုသူများမှ အဆိုပါပို့စ်များကို မြင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤကိရိယာသည် မိမိမျှဝေထားသော စာများ၊ ပုံများ၊ အခြားသူ၏ စာများ၊ ပုံများတွင် တဂ်ခံထားရခြင်းတို့ကိုသာ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
၂။ ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေ ဆက်သွယ်နိုင်လဲ? -- Who can contact me?
(က) ဘယ်သူတွေက သူငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့် တောင်းဆိုနိုင်မလဲ? -- Who can send you friend requests?
မိမိကို သူငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်တေားင်ဆိုနိုင်ခွင့်ကို သတ်မှတ်သည့်အခါ လူတိုင်းနှင့် သူငယ်ချင်းများ၏ သူငယ်ချင်းများဟူ၍ ၂ မျိုး ရှိပါသည်။
ပုံသေအားဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်ရှိ မည်သူမဆို သင့်အား သူငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ သင့်အား သူငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့် တောင်းဆိုမှုကို ပြောင်းလဲလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
၁။ Who can send you friend requests? ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၂။ ပေါ်လာသည့် အများဆိုင် သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများ၏သူငယ်ချင်းများ မှ တစ်ခုကို ရွေး၍ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
၃။ ကျွန်ုပ်ကို ဘယ်သူရှာတွေ့နိုင်မလဲ? -- Who can look me up?
(က)ကိုယ်ပေးထားတဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့ ဘယ်သူတွေ ကိုယ့်ကို ရှာနိုင်မလဲ? -- Who can look you up using the email address you provided?
သင့်ကို ရှာရာတွင် သင်ပေးထားသည့် အီးမေးလ်လိပ်စာဖြင့် မည်သူတွေကို ရှာတွေ့စေချင်ပါသလဲ? မိမိရှာတွေ့စေလိုသည့် လူများကို Who can look you up using the email address you provided? ကို နှိပ်ပြီးသောအခါတွင် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
(ခ) ကိုယ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဘယ်သူတွေ ကိုယ့်ကို ရှာနိုင်မလဲ? -- Who can look you up with the phone number you provided?
ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ရှာနိုင်မည့်သူများကို ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အထက်ပါအတိုင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကို ရှာရာတွင် သင်ပေးထားသည့် ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် မည်သူတွေကို ရှာတွေ့စေချင်ပါသလဲ? မိမိရှာတွေ့စေလိုသည့် လူများကို Who can look you up using the phone number you provided? ကို နှိပ်ပြီးသောအခါတွင်လည်း အလားတူပင် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
(ဂ) အများဆိုင်ရာ ရှာဖွေခြင်း -- Public search
Facebook ပြင်ပရှိ ရှာဖွေရေး ဆော့ဖ်ဝဲများကို သင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်လိုပါသလား?
ဤအရာကို ဖွင့်ထားပါက ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ (Search engine -- ဥပမာ - Google) မှ ယင်းတို့၏ ရလဒ်များကို ပြရာတွင် သင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့် ချိတ်ထားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ Google တွင် သင့်နာမည်ကို ရိုက်၍ ရှာသည်ဆိုပါစို့။ အကယ်၍ သင်သည် ဤအရာကို ဖွင့်ထားပါက သင်၏Facebook ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းလင့်ခ် (profile link) ပေါ်လာသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကို ပိတ်ထားလိုက်ပါက သင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားတော့မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အချိန်အနည်းငယ်တော့ ကြာနိုင်ပါသည်။ လူများက သင့်နာမည်ကို ရှာသောအခါ သင့် Facebook ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းလင့်ခ် (profile link) သည် ရှိနိုင်ပါသေးသည်။
အကယ်၍ ရှာမတွေ့စေလိုပါက Let other search engines links to your timeline ကို နှိပ်၍ အမှန်ခြစ်ကို ဖျောက်ပါ။
ထိုအခါ ပိတ်လိုသည်မှာ သေချာလားဟု မေးပါလိမ့်မည်။ အတည်ပြုပါ (Confirm) ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Facebook ပေါ်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်က စည်းကမ်းများနှင့် မကိုက်ညီသောကိစ္စများ တစ်ခုခုလုပ်နေကြောင်း မြင်တွေ့ယုံကြည်လျှင် ဖေ့စ်ဘွတ်ထံ Report လုပ်သင့်ပါသည်။
Report လုပ်နိုင်သည့် အရာ ၁၂ ခုရှိပါသည်။
၁။ ပရိုဖိုင် (Profile)
၃။ မိမိ၏ အချိန်မှတ်တမ်း (timeline) ပေါ်မှ စာများ
၄။ ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများ
၅။ စာစုများ (Messages)
၆။ စာမျက်နှာများ (Pages)
၇။ အဖွဲ့များ (Groups)
၈။ ကြော်ငြာများ (Ads)
၉။ ပွဲများ (Events)
၁၀။ မေးခွန်းများ (Questions)
၁၁။ ကွန်မန့်များ (Comments)
၁၂။ ကျွန်ုပ် မမြင်နိုင်သော အရာ(Something I can’t see)
၁။ ပရိုဖိုင် (Profile) ကို report လုပ်ရန်
၁) မိမိ report လုပ်လိုသော ပရိုဖိုင်ကို သွားပါ။
၂) ကာဗာပုံ၏ ညာဘက်ထောင့်တွင် ရှိသော ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် Report ကိုရွေးပါ။
၃) ထို့နောက် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်လုပ်ပါ။
၂။ စာများကို report လုပ်ရန်
၁) စာများ၊ ပုံများ၏ ညာဘက်ထိပ်ဆုံးတွင် မြင်ရသည့် ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Hide post သို့မဟုတ် I don’t want to see this ကို နှိပ်ပါ။
၂) Report post ကို နှိပ်ပါ။
၃) ညွှန်ကြားချက်များ ပေါ်လာသည့်အခါ စာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ရွေးချယ်၍ လုပ်နိုင်ပါပြီ။
၃။မိမိ၏ အချိန်မှတ်တမ်း (timeline) ပေါ်မှ စာများ
၁) စာ၏ ညာဘက်ထိပ်ဆုံးတွင် မြင်ရသည့် ကိုနှိပ်ပါ။
၂) I don't like this post ကို ရွေးပါ။
၃) I think it shouldn't be on Facebook ကို ရွေးပြီးနောက် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်လုပ်ပါ။s
၄။ ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို report လုပ်ရန်
၁) ၁) စာများ၏ ညာဘက်ထိပ်ဆုံးတွင် မြင်ရသည့် ကိုနှိပ်ပါ။
၂) Hide post >> Report photo သို့မဟုတ် report video ကို နှိပ်ပါ။
၅။ စာစုများကို report လုပ်ရန် (ကွန်ပျူတာပေါ်မှ)
၁) မိမိ report လုပ်လိုသော စာစုကို ဖွင့်ပါ။
၂) ညာဘက် ထိပ်ဆုံးတွင် ရှိသောကို နှိပ်ပါ။
၃) Report Spam or Abuse… ကို နှိပ်ပြီးလျှင် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်လုပ်ပါ။
၆။ ရန်လိုသောစာမျက်နှာများကို report လုပ်ရန်
၁) report လုပ်လိုသော စာမျက်နှာကို သွားပါ။
၂) စာမျက်နှာ၏ ကာဗာပုံနားတွင် ရှိသော ကို နှိပ်ပါ။
၃) ကို ရွေးပါ။ ပြီးလျှင် ညွန်ကြားချက်များကို လိုက်လုပ်ပါ။
ဖေ့ဘွတ်မှ အဆိုပါ စာမျက်နှာကို စစ်ဆေးကြည့်သည့်အခါ လူမှုကွန်ယက်စံနှုန်းများကို ချိုးဖောက်ထားပါက ထိုစာမျက်နှာအတွက် တာဝန်ရှိသော လူကို ဖေ့စ်ဘွတ်မှ သတိပေးခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၇။ အဖွဲ့များကို report လုပ်ရန်
ဖေ့စ်ဘွတ်၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်နေသည့် အဖွဲ့များကို တွေ့ပါက report လုပ်၍ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
၁) report လုပ်လိုသော အဖွဲ့ကို သွားပါ။
၂) ညာဘက်ထောင့်နားတွင် ရှိသောကို နှိပ်ပါ။
၃) ကျလာသော menu မှ Report Group ကို ရွေးပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် သက်ဆိုင်သော အဖွဲ့များ၊ လိင်အသားပေးပုံများ၊ စာများသာမက တစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တိုက်ခိုက်သော၊ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပေါ်စေရန် အားပေးသော အဖွဲ့များကို တွေ့ပါက report လုပ်၍ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
၈။ ကြော်ငြာများကို report လုပ်ရန်
၁) ကြော်ငြာအပေါ်သို့ ရွှေ့လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ညာဘက်ထောင့်တွင် ပေါ်လာသော X ကို နှိပ်ပါ။
၂) ကြော်ငြာတစ်ခုကိုသာ report လုပ်ရန် Hide this ad ကို ရွေးပါ။ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာသူထံမှ ကြော်ငြာအားလုံးကို မမြင်ချင်ပါက Hide all from... ကို နှိပ်ပါ။
၉။ ပွဲများကို report လုပ်ရန်
ဖေ့စ်ဘွတ်၏ လူမှုကွန်ယက်စံနှုန်းများကို မလိုက်နာသော ပွဲများကို တွေ့ပါက ညာဘက်ထိပ်နားတွင် ရှိသော ကို နှိပ်ပြီး Report Event ကို ရွေးခြင်းအားဖြင့် ထိုပွဲကို report လုပ်နိုင်ပါသည်။
၁၀။ မေးခွန်းများကို report လုပ်ရန်
၁) မေးခွန်း၏ ညာဘက်ထိပ်တွင် ရှိသော ကို နှိပ်ပါ။
၂) Report to Admin သို့မဟုတ် Report/Mark as Spam
၁၁။ ကွန်မန့်များကို report လုပ်ရန်
၁) ညာဘက်ထိပ်တွင် ရှိသော ကို နှိပ်ပါ။
၂) Report ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၁၂။ ကျွန်ုပ် မမြင်နိုင်သော အရာ(Something I can’t see) ကို report လုပ်ရန်
အကယ်၍ သင် report လုပ်ချင်သော အရာကို အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကြောင့် မမြင်နိုင်ပါက အောက်ပါဖောင်ကို ဖြည့်၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဖောင်ကို ရယူနိုင်ရန် အောက်ပါ လင့်ကို သွားပါ။
မိမိ report လုပ်လိုသော အရာသည် အထက်ပါ အကြောင်းအရာများထဲတွင် မပါသေးပါက See more options ကို နှိပ်၍ နောက်ထပ်ရှိသေးသော ရွေးချယ်စရာများကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။
၁။ ကိုက်ညီသော အကြောင်းပြချက်ကို ရွေးပါ။
It’s annoying or not interesting.
စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတယ် သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပါ။
လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်သော ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ ဖြစ်ပါသည်။
It insults or humiliates me or someone I know.
ကျွန်ုပ် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်နှင့် သိသည့် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို စော်ကားခြင်း သို့မဟုတ် အရှက်တကွဲဖြစ်စေပါသည်။
It is hateful towardsarace, religion, gender, sexual orientation or ability.
လူတစ်ယောက်၏ ဖြစ်တည်မှုများ ဖြစ်သော လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား/မ၊ လိင်တိမ်းညွှတ်မှု သို့မဟုတ် စွမ်းရည်များကို ရည်ရွယ်၍ ပြောထားသော အမုန်းစကားများ ဖြစ်ပါသည်။
အခြား ရွေးချယ်စရာများကို ကြည့်မည်။
It’sarumor or has false information.
ကောလဟာလ သို့မဟုတ် သတင်းအမှားများ ဖြစ်သည်။
It displays private information.
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားသည်။
It shows someone injuring or planning to injure himself.
တစ်စုံတစ်ယောက် အနာတရဖြစ်နေခြင်း သို့မဟုတ် သူ့ကိုယ်သူ အနာတရဖြစ်ရန် ကြိုးစားနေသည်ကို ပြထားသည်။
I think it is an unauthorized use of my intellectual property.
မူပိုင်ခွင့်မရှိပဲ ကျွန်ုပ်ဖန်တီးထားသော အရာများကို ယူသုံးထားသည်ဟု ထင်သည်။
စာရှုပ်ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်အတုများရောင်းခြင်း)
ကိုက်ညီသော ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကို ရွေးပြီးသည့်နောက်တွင် အောက်တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်၍ ပေါ်သည့် အရာသည်လည်း ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
Submit to Facebook for Review ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Done ကို နှိပ်ပြီးသောအခါ Report လုပ်ပြီးပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Facebook နှင့် ပတ်သတ်၍ အကူအညီလိုအပ်ပါက အောက်ပါလင့်တွင် သွားရောက်မေးမြန်းနိုင်၊ အကူအညီများ ရယူနိုင်ပါသည်။